Ubuntu mobile – Ck4Ubuntu
Ubuntu on Tablet / Phone my reviews
March 9, 2013 chitkoko	1 Comment Ubuntu mobile, Ubuntu Tablet
Bright. Brilliant. Beautiful
Ubuntu on Tablet သည်
အလုပ်များကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း ( ဥပမာ – tablet / phone တစ်လုံးပေါ်တွင် သီချင်းနားထောင်ရင်း ၊ email စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ဓါတ်ပုံများပြုပြင်ခြင်း စသည်တို့ကို တစ်ပြိုင်နက် တည်း ပြုလုပ်နိုင်သည် ကို ဆိုလိုပါသည် ။)
လုံခြုံရေးအတွက်လည်း ကာကွယ်မှု ပါရှိပြီးသား Operating System တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ။
Ubuntu Tablet / Mobile Operating System သည် tablet design လောကတွင်အများနှင့်မတူ တမူထူးခြားသော Operating System ဖြစ်သည့်အပြင် Ubuntu Mobile Operating System ၏ ရှေ့ ပြေးလည်းဖြစ်ပါသည်။
Bright လင်းလက်တောက်ပခြင်း ၊
Brilliant ထူးခြားပြောင်မြောက်ခြင်း ၊
Beautiful လှပတင့်တယ်ခြင်း တို့အပြင် သဘာဝအတိုင်း စမတ်ကြ သည့်အတွက် သုံးစွဲ မည့် သူအားလုံး အတွက် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံပါသည် ။
ယခု အခါတွင် developer များအတွက် ထုတ်ပေးထားသော pre-version ကို သုံးစွဲနိုင်ရန် ထုတ်ပေးထားပါသည်။
ယင်း pre-version အသုံးပြုနိုင် သော devices များ ကိုအောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ် များတွင် ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်–
Running fine (ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်သောစာရင်း)
Sort of working ( စမ်းသပ်ဆဲ ubuntu တင်နိုင်သော စာရင်း)
Device Status page
HTC DNA dlx
Kindle Fire 1st Gen otter
Kindle Fire 2nd Gen otter2
Kindle Fire HD 8.9″ jem
LG Nitro/Optimus HD p930
Motorola Droid RAZR spyder
Motorola RAZR (GSM/International) umts_spyder
Samsung Galaxy S B (GT-I9000B) galaxysbmtd
Work in progress( စမ်းသပ်ဆဲ စာရင်း)
Please try to keep the tables sorted.
Device Code name Unlocking instructions Install instructions Code/Image Contact person
Acer Iconia A700 a700 here here here ~skyFx
Adevent Vega p10an01 WIP WIP here HyperTurtle
Alcatel OT-995 cocktail WIP WIP WIP ~fonix232
Dell Streak7streak7 WIP here WIP ~giveen
HTC One X+ enrc2b WIP WIP WIP ~Lloir
HTC One X+ evitareul WIP WIP WIP ~Lloir
HTC One XL evita WIP WIP WIP ~rohan32
Kindle Fire HD 7″ tate WIP WIP WIP ~hashcode0f
LG Optimus 4x HD eternity WIP WIP WIP ashley.johnson [at] madmedialabs [dot] com
LG Optimus 2x p990 WIP WIP WIP ~smartboyhw
Motorola Atrix olympus WIP WIP WIP Scott Weldon
Nexus S crespo WIP WIP WIP ~michaelevans
Notion Ink Adam PQi 3G adam_3g WIP WIP WIP ~borkata
Notion Ink Adam PQi Wifi adam WIP WIP WIP ~borkata
Samsung Galaxy Note i717 qquincyatt WIP WIP WIP notanimposter
Samsung Galaxy S SCL (GT-I9003) galaxysl WIP WIP WIP David Planella
Samsung Galaxy S2 i9100 WIP here http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2165568 Bubble-be
SGS II i777 WIP WIP WIP ~vanhoof
SGS III i9300 WIP WIP not currently possible yet ~gianguidorama
Samsung Galaxy Tab 10.1 Wifi p4wifi WIP WIP WIP ~patrickseemann
Samsung Galaxy Tab27.0 p3100 WIP WIP here Daniel de Oliveira / ketut.kumajaya
Ubuntu Phablet OS ကို SamSaung Galaxy Nexus Phone တွင် ထည့်သွင်း၍ စမ်းသပ်ရာတွင်
Booting Time ၂၅ စက္ကန့် ခန့်( စက်စတင်ဖွင့်သည့် အချိန်မှ Log in screen မြင်သည့်အချိန်ထိ )
Login ဝင်ပြီးနောက် Home Screen အားတွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည် ။
Home Screen ၏ ညာဘက်တွင် Apps (Application Screen ) ၊
Apps (Application Screen ) ၏ ညာဘက်တွင် Videos Screen အားတွေ့မြင်ရမည်။
Ubuntu Phone ၏ ထူးခြားချက်မှာ icon များအတွက် သီးခြားနေရာ မပေးဘဲ Gesture ကိုအသုံးပြု ၍ user များလွယ်လင့်တကူအသုံးပြုနိုင်ရန် တီထွင်ဖန်တီးထားပါသည် ။
Phone ၏ အပေါ်ဘက်မှ အောက်ဘက်သို့ ဆွဲ ချ ၍ ဘယ် / ညာ ရွှေ့ ပါက
Message – Sound – Networks – Battery – Date and Time တို့အားမိမိ ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
Phone ၏ ဘယ်ဘက် body နားမှ ဖိဆွဲလိုက်ပါက Unity bar ကိုမြင်တွေ့ နိုင်ပြီး ၊ မိမိစိတ်ကြိုက် Application ကို ရယူသုံးစွဲ နိုင်မည် ။
Unity Bar အား (အပေါ် မှ အောက်) အောက်ပါအတိုင်းမြင်တွေ့ ရမည်ဖြစ်သည် ။
Login Screen ကိုဝင် လိုက်ချိန်တွင် Home Page အား (အပေါ် မှ အောက်) အောက်ပါအတိုင်းမြင်တွေ့ ရမည်ဖြစ်သည် ။
People Recently in Touch
Video Popular Online
Home Screen ၏ ညာဘက်တွင် Application Screen ကို( အပေါ် မှ အောက်) အောက်ပါအတိုင်းမြင်တွေ့ ရမည်ဖြစ်သည် ။
Application Screen ၏ ညာဘက်တွင် Video Screen ကို( အပေါ် မှ အောက်) အောက်ပါအတိုင်းမြင်တွေ့ ရမည်ဖြစ်သည် ။
Home Screen မှတဆင့် Phone ဆက်ရန် ဝင်ရောက်ပါက-
Keypad ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ညာဘက်သို့ရွှေ့လိုက် ပါက
Conversations -ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ညာဘက်သို့ရွှေ့လိုက် ပါက
Contacts ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည် ။
Home Screen မှတဆင့် Message သို့ ဝင်ရောက်ပါက မိမိထံ facebook ,skype , twitter နှင့် Mobile တို့မှ မိမိထံ ဆက်သွယ်ထားသော Lists များကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Ubuntu Phone တွင် ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Feature မှာ HUD Voice Command ဖြစ်ပါသည်။
Notes တွင် ပါ HUD ကိုအသုံးပြု၍ save , quit စသည်ဖြင့် အသံဖြင့် အမိန့်ပေးခိုင်းနိူင်ပါသည်။
* P.S -အထက်ပါ Phone Reviews ကို ရေးသားရန် အကူအညီပေးခဲ့သော Ko Ko Ye ,Phone ပိုင်ရှင် Ethan Kurt တို့ကိုကျေး ဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွနု်ပ်၏ reviews သည် ကျွနု်ပ် နှင့်သာသက်ဆိုင်ပါသည်။
EF49 DD71 FE8D 5656 9510
3ED4 1511 4B86 5F9B 9E63
February 22, 2013 chitkoko	1 Comment Ubuntu mobile, Ubuntu Tablet
Ubuntu Phone OS ကိုNexus ဖုန ်း သို့ထ ည့်သ ွင ်း နည်း
maguro – Galaxy Nexus
mrouper – Nexus 7
manta – Nexus 10
ပထမဆုံး သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ထားပါ။
How to unlock Samsung Galaxy Nexus bootloader
ဒီအညွှန်းဟာ Galaxy Nexus အတွက်လို့ ပြောထားပေမယ့် အခြားသော Nexus များအတွက်လဲ အသုံးဝင်ပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ Recovery ကို Flash ပြုလုပ်ရန် အတွက် cdimage.ubuntu.com ကနေပြီး
မိမိဖုန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်များ ကိုဆွဲယူထားပါ။
ပြီးရင်တော့ android adb ကနေ flashboot ကနေ recovery ကို flalsh လုပ်ပါမယ်။
အကယ်၍ သင့်ဖုန်းမှာ Clockworkmod recovery ရှိနေမယ်ဆို ထပ်ပြီး တင်ဖို့မလိုပါဘူး အဆင့် ၃
ဖုန်းကို Power ပိတ်ပါ။ Bootloader mode မှ Recobery သို့ရွေးချယ်ပြီး Power Botton
သင် Clockworkmod recovery သို့ရောက်ရှိပါမည်။
Install zip from sdcard ကို ရွေးချယ်ပါ။
sdcard ထဲမှ quantal-preinstalled-armel+.zip ကိုရွေးချယ်ပြီး
ပြီးလျှင် quantal-preinstalled-phablet-armhf.zip ကိုပါ Flash ထပ်မံပြုလုပ်ပါ။
သင့်ဖုန်းကို Reboot ပြုလုပ်ပါ။
သင် Ubuntu ဖုန်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
(ဤ Ubuntu ဖုန်းသည် ပထမဆုံး စမ်းသပ် အဆင့်သာ ရှိပါသေးသည်။)
Ubuntu Easy Installer
1- Download your device specific recovery zip file
2- Download the phablet recovery zip file
3a- Reboot into recovery (non stock) -> adb reboot recovery
– Select side load on device
– adb sideload zipfile
3b- Push zips to /sdcard/
– And go to the deploy zip file (as if it were cyanogenmod), for
This post is Credit to Ko Ko Ye .
info@ubuntu-mm.net, 12, Aung Taw Mu St, SanChaung Tsp, Yangon
Tags: install, Ubuntu Phone Touch/install, Ubuntu Tablet	|